कांग्रेस पार्टी जाेगाउन देउवा, पाैडेल र सिटाैलालाई निषेध गर्नु अपरीहार्य - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
कांग्रेस पार्टी जाेगाउन देउवा, पाैडेल र सिटाैलालाई निषेध गर्नु अपरीहार्य
२०७७ श्रावण १७, शनिबार ०६:११:००
नेपाली समाज र अर्थतन्त्रमा दुईखाले अदृश्य सत्ता छन्, गुठीयार र बिर्तावाल । गुठी सत्ताले सामाजिक रीतिथिति त जोगाएको छ तर यसले परम्पराका नाममा संकीर्णताको संरक्षण गर्छ ।
हरेक पुस्तालाई संस्कार होइन, कर्मकाण्ड हस्तान्तरण गर्छ । आधुनिकता, उदारता र रचनात्मकतालाई सहजै स्वीकार गर्दैन । प्रायः निषेध नै गर्छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक सत्तो छिनोफानो समेत यसैले गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा देखिने संकीर्णता, पुरातनवाद र अन्धविश्वासको प्रायः स्रोत यही नै हो ।
दोस्रो, बिर्तावाल । सत्तालाई रिझाएवापत वा सत्तामा पहुँच हुनेहरुलाई ठूल्ठूलो खेतीयोग्य जमिन राज्यले बाँड्ने प्रथा बिर्ता थियो । कतिपय बिर्तावालले त राज्यलाई मालपोत बुझाउनु पनि पर्दैनथ्यो । बुझाउनै परे त्यो नाम मात्रको हुन्थ्यो ।
अझ केहीले त मालपोत उठाएर खान पाउने अधिकारसमेत रहन्थ्यो । यसले राजनीतिक र प्रशासनिक सत्तासँगै आर्थिक सत्तालाई समेत नियन्त्रण गर्ने हैसियत राख्थ्यो । भाइभारदार, गुरु पुरोहित र आफूप्रति वफादारहरुलाई बाँडिएको जग्गामा कर लाग्न थालेपछि राजा महेन्द्र र बीपी कोइरालाका बीच शक्ति सन्तुलन नै उलटपुलट भएको थियो । तर, नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रमा अझै यो प्रथाका असरदार अवशेषहरु छन् । सबभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसमै छन् ।
नेपाली कांग्रेसभित्रको गुठियार र बिर्तावाल प्रवृत्तिले केवल वफादार कार्यकर्ता मात्र जन्माएको छ । गठियारले जहिल्यै वंशीय विरासत खोज्छ । वंशकै वरिपरि शक्ति केन्द्रित गर्छ ।
त्यहाँ विद्रोह, आलोचना र रचनात्मकतालाई कुनै ठाउँ हुँदैन । त्यस्तै बिर्तावालले राज्यको प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गर्ने, जनताबाट माल र पोत उठाउने र राज्यलाई सके दिँदै नदिने, नसके नाम मात्रको दिने प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
केन्द्रमा एउटा नेता, विभिन्न तह र तप्कामा तिनका वफादार बिर्तावाल रहने, केन्द्रका नेताका नाममा बिर्तावालले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने । केन्द्रीय नेतासामु एउटा प्रश्न समेत शिर ठाडो पारेर गर्न नसक्ने, त्यही बिर्ता खाएवापत् सधैँ वफादार बनिरहनुपर्ने । यो प्रवृत्ति अरु पार्टीहरुमा पनि छ, कांग्रेसमा सबैभन्दा बढी छ ।
गुठी र बिर्ताभन्दा बाहिरको घेरामा कांग्रेसको शक्ति पुग्न सकेको छैन । शक्ति नपुगेसम्म सोचको दायरा फराकिलो बन्न सक्दैन । अथवा सिर्जनशील सोचले कांग्रेसभित्र प्रवेश पाएको छैन । आन्तरिक रुपमा गुठी र बिर्ता प्रवृत्तिले सिर्जनशीलताको बन्ध्याकरण गरिएको छ ।
स्वतन्त्र समाजबाट प्रवेश नपाउने गरी गुठीयार र बिर्तावालले घेरेर राखेका छन् । यसले कांग्रेसको शरीररचना प्रणालीलाई नै जाम गरिदिएको छ । बिस्तारै यसले ब्लड क्यान्सरको रुप लिँदै छ ।
नयाँ र ताजा रक्तसञ्चार नगर्ने हो भने नेपालको एक पुरानो लोकतान्त्रिक भनिने पार्टी थप अधोगतितिर उन्मुख हुनेछ । कुनै दिन इतिहासका कक्षामा मात्रै यो सीमित नहोला भन्न सकिन्न । यही दसा र दिशा कायम रहेमा त्यो दिन धेरै टाढा पनि छैन ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिले त्यही बिर्तावाल र गुठियार सोच भएकाहरुको हालीमुहाली छ । नेपालमा जनआन्दोलन सुरु भएपछि दमनबाट जोगिन बेलायत अमेरिका पुगेर पिजा बर्गरको स्वादमा हराएकाहरुलाई के थाहा, नेपाली जनताले आफ्नो ज्यानको आहुति किन दिएका थिए भनेर रु यिनले राजनीति भनेको सत्तामा पुग्ने र मुनाफा जम्मा गर्ने उद्यमका बुझेका छन् । यसैलाई पुँजीवाद ठानेका छन् । आमनागरिकका दुःखसुखसँग यिनको खासै गहकिलो साइनो छैन ।
यी त केवल फिल्म र कविताका विषय मात्रै हुन् भन्ने लाग्छ यिनलाई । फिल्मले दुई घण्टा समय बिताउन गज्जबको काम गर्छ । गाउँले दृश्यहरुले आँखालाई आनन्द दिन्छ । दर्शकको आँखामा आँसु बगेछन् भने त्यो अझै आनन्दायी भयो । आनन्दसँगै पैसा असुल भयो । फिल्म सकियो । आनन्द पनि सकियो । फेरि उद्यम सुरु भयो । बस् । कुनै भावुक कविता पनि यस्तै हो । कसैको पीडा र छटपटी, कसैका लागि आनन्दको अनुभूति ।
शेरबहादुर देउवासँग आफ्ना गुठीयार, बिर्तावाल वा भारदारसँग भन्ने एउटै वाक्य छ, म चारपटक प्रधानमन्त्री भएँ, तिमीहरु बन्न सक्छौ रु यही पाराले बनिँदैन । हुन पनि हो, देउवा रहुन्जेल उनका भारदारहरुको पालो आउने छैन । कांग्रेसलाई रसातलमा नपुर्याई देउवाले छाड्नेवाला छैनन् ।
तर, यो पनि सही हो कि उनी प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री भएर गरेको काम के हो भनेर भन्ने कुरा उनीसँग छैन । देउवा मात्रै होइन, रामचन्द्र पौडेलदेखि कृष्ण सिटौलासम्मको हालत त्यही हो । पौडेल र सिटौला प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा मात्र नबसेका हुन् । राज्यशक्तिको प्रयोग—दुरुपयोग भरपूर गरिसकेका हुन् ।
पार्टी सभापतिको कुर्सीमा मात्रै नबसेका हुन्, बाँकी सबै गर्नु नगर्नु गरिसकेका हुन् । अहिलेसम्म कांग्रेसका नाममा भएका कृत्य—कुकृत्यमा जति देउवा र पूर्ववर्ती नेतृत्व दोषी छ, त्योभन्दा कम दोषी पौडेल र सिटौलाहरु छैनन् । यसको अर्थ यी सबै परीक्षित हुन् । यो गुठियार र बिर्तावाल वर्गलाई विस्थापित नगरेसम्म कांग्रेसमा नयाँ रक्तसञ्चार हुने छैन ।
कांग्रेसमा वंश र विरासतको आडमा पार्टी, सत्ता र स्रोत एकलौटी गर्ने विकृति त छँदै थियो, त्यसमा देउवाले अरु विकृत अभ्यास सुरु गरिदिए । देउवाकै देन भन्नुपर्छ, आज संसारभरका लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै निकम्मा र निर्लज्ज राजनीतिक शक्ति खोज्नुपरेमा पक्का पनि नेपाली कांग्रेसको नाम छुट्ने छैन । बरु यो अग्रपंक्तिमा देखिने जोखिम बढी छ ।
कुनै पनि संसदीय व्यवस्थामा बहुमतको सरकार, अल्पमतको आलोचक हुने सार्वभौम नियम हो । तर, यहाँ बरु सत्तापक्षभित्रैबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अकर्मण्यताको आलोचना भइरहेको छ । त्यहाँभित्रको एक जबरजस्त स्वरु अभियान र आन्दोलन बन्न सक्ने देखिँदै छ । संविधान र जनअभिमतबाटै सत्ताको रखबारी गर्ने दायित्व पाएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रमुख नेता शेरबहादुर देउवा ओलीको अकर्मण्यतामा ढाल बनेर बसेका छन् ।
यसको अर्थ हुन्छ, देउवाले सत्ता साझेदार घटकभन्दा पनि तल्लो स्तरमा गएर मोलमोलाइ र लेनदेन गरिरहेका छन् । झट्ट हेर्दा ओली र देउवा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षका नेता नभई एकाघरका दुई अंशियारजस्ता देखिन्छन् । यहाँनिर प्रश्न उठ्न सक्छ, दुई नेता मिले त के भो ?
मिल्नु राम्रो हो तर मिल्ने हदसम्म पो मिल्नुपर्छ । अदृश्य लेनदेनका आधार किन मिल्ने रु देउवाले ओलीलाई काँध थाप्दा नै ओलीको अहंकारको घोडामा लगाम कस्ने आज कोही देखिएको छैन । प्रतिपक्षको आड पाएर प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रका आलोचकमाथि दम्भको डोजर चलाइरहेका छन् । उनको अहंकारको घोडामा लगाम कस्ने प्रतिपक्षले नैतिक बल गुमएको छ । अख्तियार, अदालत, मूलधारे मिडिया र नागरिक समाजको ठूलो तप्का गरुडको छायाँमा परेजस्तो छ । ओलीमाथि औँला उठाउने हैसियत संवैधानिक निकायहरुले समेत गुमाइसकेको तथ्य ओम्नी र यतीका अनेक हर्कतहरुमा मौन बस्नुले नै प्रमाणित गर्छ ।
तर ओली र उनको दलको विकल्पमा जोडदारसँग जनतासामु उपस्थित हुनुपर्ने कांग्रेस आफै ख्याउटिएको छ । नुन र तेल पनि छिमेकीसँग मागेर गुजारा चलाउने परिवारजस्तै सत्तापक्षसँग एकाध नियुक्ति र व्यापारिक परियोजनामा सत्तापक्षको कृपाको अपेक्षा गर्ने प्रतिपक्षबाट के आस गर्ने ? तसर्थ, गुठी र बिर्ताको घेराबाहिर रहेको लोकतान्त्रिक युवा शक्तिले कांग्रेसभित्र कू गर्न सक्नुपर्छ । कम्तीमा पनि देउवा, पौडेल र सिटौलालाई गलहत्याउन सके पनि कांग्रेसमा पुनःताजगी आउन सक्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सक र परिवारका तीन सदस्यलाई कोरोन...
२५ शैयासम्मका अस्पतालको दर्ता, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिको अनुमत...
लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्ट नियुक्त्त
उपत्यकामा संक्रमण बढेपछि होटल रेस्टुरेन्ट बन्द गर्ने सरकारको...